Khibradda Oxiracetam: Sidee budada Oxiracetam ii Dareysaa?
Waa maxay Oxiracetam?
Oxiracetam waa mid ka mid ah nootropic ka weyn supplements ka soo jeeda qoyska racetam. Waxay ahayd xarunta saddexaad ee cunsuriyada ka dib piracetam iyo aniracetam waxaana markii ugu horeysay la soo saaray 1970s. Oxiracetam waa nooc ka dhasha kiimikada asalka racetam, piracetam.
Sida cunsuriyadaha kale, oxiracetam waxay ka koobantahay pyrrolidone guntiisa. Si kastaba ha noqotee, oxiracetam waxay leedahay koox hydroxyl ah, waana sababta ay uga awood badan tahay isku-dhafka waalidkeed, piracetam.
Waxaa si fiican loogu yaqaanaa awoodeeda inay ku hagaajiso shaqada garashada sida xusuusta, diiradda iyo barashada iyo sidoo kale saameynta kicinta ee ay bixiso. Oxiracetam nootropics guud ahaan waxay xoojisaa caafimaadkaaga guud ee maskaxda.
Budada Oxiracetam: Maxaa Loogu Adeegsadaa Oxiracetam?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo isticmaalka oxiracetam ah oo ay soo wariyeen cilmi baarayaashu iyo sidoo kale khibradaha oxiracetam ee lagu wadaago barnaamijyada kala duwan.
Oxiracetam, sida cunsuriyada kale oo kale, waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo garashada iyadoo la wanaajinayo awoodda sameynta xusuusta muddada-gaaban iyo muddada-dheer labadaba. Sidaa awgeed waxaa adeegsada qof kasta oo u baahan inuu barto oo dib u xasuusto macluumaadka. Way ku fiicantahay ardayda u baahan inay ku fiicnaadaan imtixaanadooda, maadaama ay wax badan ka tareyso inay ka caawiso inay bartaan oo ay si fudud ugulaabtaan waxyaabaha. Waxay kaloo ka caawisaa inay xoogga saaraan oo ay diiradda saaraan muddada dheer.
Oxiracetam ayaa adeegsata waa mid u gaar ah inay bixiso kobcinta garashada iyadoo maskaxdaada kicineysa si aad u ilaaliso feejignaanta iyo feejignaanta. Waxa ugu fiican ee ku saabsan saameynteeda kicinta ayaa ah in si ka duwan sida kiciyeyaasha kale ee ka tagta mid ka mid ah dareenka aan fiicnayn iyo xasillooni la'aan, oxiracetam ay kicin doonto maskaxda oo waxay kaa tagi doontaa deganaan iyo nasasho. Shaqaalaha runtii u baahan fiirsashada iyo diiradda, waayo-aragnimada oxiracetam waa shaki la'aan.
Cilmi-baarista ayaa sidoo kale tilmaamaysa isticmaalka oxiracetam ee lagu daaweynayo hoos u dhaca garashada garashada oo ay ka mid tahay xusuusta oo hoos u dhacda bukaannada qaba cudurka Alzheimer iyadoo la siinayo ilaalinta neerfaha.
Marka tusaale ahaan mid isu diyaarinayo wareysiga, waxaa muhiim noqon doonta inaad u muuqato qof caqli badan. Oxiracetam waxay hagaajineysaa hadalka hadalka oo dadka ka caawiya inay adeegsadaan ereyada ugu fiican ee kor u qaadaya fursadahooda soo dejinta shaqooyinkooda riyada.
Budada Oxiracetam sidoo kale waa ikhtiyaar loogu talagalay hagaajinta xusuusta dadka waayeelka ah ee badanaa la ildaran xusuusta ama hoos u dhaca.
Maaddaama jidhkeenu aanu soo saarin oxiracetam kaligood, si loo goosto faa'iidooyinka la sheegay ee loo yaqaan 'oxiracetam' waxaad hubaal ka fiirsan doontaa oxiracetam ka iibso iibiyeyaasha lagu kalsoon yahay. ?????
Inta badan cilmi-baarista bini-aadamka waxay ku saleysneyd dadka waayeelka ah iyo asal ahaan shakhsiyaadka aan caafimaadka qabin, sidaa awgeed cilmi baaris dheeri ah oo ku saabsan dadka caafimaadka qaba ayaa lagama maarmaan u ah si loo xaqiijiyo isticmaalka oxiracetam. Si kastaba ha noqotee, dib u eegista oxiracetam shakhsi ahaaneed waxay muujineysaa kartida oxiracetam ee shakhsiyaadka caafimaadka iyo dhalinyarada.
Oxiracetam: Sidee U Shaqaysaa?
In kasta oo, faa'iidooyinka oxiracetam si fiican loo yaqaan hababka ficil ahaan ay u shaqeyso weli si cad looma qeexin. Si kastaba ha noqotee, dhowr nooc oo oxiracetam ah oo ficil ah ayaa la soo sheegay.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah hababka oxiracetam ee waxqabadka;
i. Wuxuu nidaamiyaa neurotransmitter-ka, acetylcholine
Labadan neurotransmitters-ku waxay door muhiim ah ka cayaaraan awooddeena inaan sameysano xusuus-gaaban iyo mid-dheerba, barashada iyo guud ahaan howlaha garashada.
Oxiracetam wuxuu saameyn ku yeeshaa nidaamyada cholinergic iyo glutamate taas oo wax ka beddeleysa sii deynta kuwan neerfayaasha muhiimka ah, acetylcholine ACh iyo glutamate.
Gaar ahaan, oxiracetam wuxuu kordhiyaa xasaasiyadda qabtayaasha acetylcholine. Tani waxay ku sameysaa iyada oo kor u qaadeysa borotiinka kinase C (PKC) enzyme oo saameyn ku leh soo-dhoweynta M1 acetylcholine.
Oxiracetam nootropic sidoo kale waxaa lagu muujiyey inay awood u leedahay inay hagaajiso soo-dhoweeyeyaasha waxyeellada soo gaadhay sidaas awgeed waxay hubisaa heerarka sare ee ACh ee la xidhiidha shaqada garashada
ii. Guryaha maskaxda kiciya
Oxiracetam nootropics waxay bixisaa saameyn kiciye khafiif ah nidaamka neerfaha ee dhexe.
Oxiracetam wuxuu ku dhacaa qoyska ampakine ee xeryahooda. Ampakine waxaa loo yaqaanaa inay muujiso guryaha kicinta. Ampakine waa daawooyin saameyn ku leh soo-dhoweynta glutamatergic AMPA. Nasiib wanaag, si ka duwan kiciyeyaasha kale sida kafee-ka kaa taga hurdo la’aanta iyo gariirka, ampakine kuma daayo waxyeellooyin aan wanaagsaneyn.
Sidaa darteed Oxiracetam waxay bixisaa saameyn kicineed oo kaa dhigeysa inaad feejignaato oo aad diirada saarto adiga oo maskaxdaada iyo jirkaaga ka dhigaya deganaan iyo nasasho.
Intaa waxaa dheer, oxiracetam waxay sare u qaadi kartaa heerarka fosfoorasyada tamarta sare leh ee doorka ka ciyaara kobcinta tamarta iyo xoojinta diiradda.
iii. Wax ka beddel nidaamka glutamate
Oxiracetam wuxuu saameeyaa nidaamka glutamate-ka asagana wuxuu saameyn ku yeeshaa sii deynta neurotransmitter, glutamate. Waxay bixisaa saameyn xoog leh iyo waqti dheeri ah.
Glutamate waa midka ugu badan neurotransmitter ee habka neerfaha badanaa u diro calaamadaha maskaxda iyo jirka oo dhan.
Glutamate wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa garashada garashada iyo waliba si la mid ah xusuusta iyo barashada.
iv. Waxay xoojisaa xiriirka u dhexeeya neerfaha
Daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan in oxiracetam uu wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya neur-mareenada ku jira hippocampus. Hippocampus waa qaybta maskaxda ee saameysa xusuusta, shucuurta, iyo nidaamka neerfaha dhexe.
Oxiracetam ayaa tan ku gaarta laba siyaabood. Mid waa iyada oo loo marayo kicinta sii deynta aashitada 'D-aspartic acid' iyo tan labaad, iyada oo la saameynayo dheef-shiid kiimikaadka 'lipid metabolism'. Dheef-shiid kiimikaad hooseeya waxay hubisaa inay jirto tamar maskaxeed oo ku filan oo loogu talagalay neerfayaasha shaqeeya.
Oxiracetam Raadka & Faa'iidooyinka
Waxaa jira noocyo badan oo faa'iidooyinka oxiracetam ah oo la soo sheegay in kasta oo kaabista aysan oggolaan Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA).
Hoos waxaa ku qoran faa'iidooyinka oxiracetam;
i. Waxay xoojisaa xusuusta iyo barashada
Oxiracetam waa mid caan ku ah awoodda ay u leedahay inay kordhiso xusuusta. Waxay hagaajisaa sameynta xusuusta cusub iyo sidoo kale waxay kordhisaa xawaaraha ay maskaxdu ku shaqeyso oo ay dib ugu xasuusato macluumaadka.
Oxiracetam sidoo kale waxay xoojisaa xasuusta adoo yareynaya dhaawaca dareemayaasha, kor u qaadida dheef-shiid kiimikaadka maskaxda ku jira, kordhinta socodka dhiigga iyo sidoo kale joojinta firfircoonida astrocyte.
Qulqulka dhiigga ee aagga maskaxda ayaa aad muhiim u ah si loo hubiyo in ogsajiin ku filan ay maskaxda gasho si ay maskaxda ugu shaqeyso maskaxda oo ay kujirto xusuusta.
Intaa waxaa dheer, diiqadda oksidheer waxay ku dhici kartaa dhowr sababood awgood iyo haddii aan la xakamayn ay sababi karto dhaawac maskaxeed. Kordhinta Oxiracetam u imow samatabbixinta adoo hagaajinaya dhaawaca soo gaadha neerfaha.
Dheeraad ah, oxiracetam waxaa loo soo jeediyay in la wanaajiyo awoodda muddada-dheer ee laga yaabo inay sabab u tahay sii-deynta sii kordheysa ee glutamate iyo-aspartic acid ee hippocampus.
Daraasad lagu sameeyay 60 qof oo waayeel ah oo garaadkoodu hoos u dhacay, qiyaasta oxiracetam ee 400 mg saddex jeer maalintii ayaa la ogaaday inay si weyn kor ugu qaaddo xusuusta iyadoo la yareynayo astaamaha hoos u dhaca garashada.
Daraasad kale oo ku saabsan 40 waayeel ah oo waallida qaba, oxiracetam oo ah 2,400 mg maalin kasta ayaa lagu ogaadey inay wanaajineyso muddada-gaaban xusuusta iyo sidoo kale ku hadalka afka.
ii. Waxay xoojisaa feejignaanta iyo diiradda
Markaad la kulanto hawl u baahan fiiro buuxda muddo dheer, oxiracetam ayaa noqon karta doorashada ugu fiican. Nolosha nuska ah ee Oxiracetam waxay ku saabsan tahay saacadaha 8-10 oo markaa waxay ku siin karaan faa'iidooyin dheer.
Oxiracetam waxay kaa caawin kartaa inaad diirada saarto hawl mudo dheer adigoon luminin ujeeda iyo feejignaanta. Oxiracetam waxay la xiriirtaa wax soo saarka tamarta maskaxda sidaa darteed waxay siisaa tamarta loo baahan yahay si ay xoogga saarto hawl muddo dheer sidoo kalena ay u bartaan waxyaabo cusub si fudud.
Oxiracetam waxay bixisaa saameyn kiciya oo fudud oo kaa caawisa inaad xoogga saarto adigoon lumin xiisaha iyo dareenka.
Laba tijaabo oo bini'aadam ah oo ku lug leh 96 waayeel ah oo waallida qaba iyo tan kale ee ku lug leh 43 qof oo leh hoos u dhac ku yimaadda howlaha garaadka, kaabbashada 'oxiracetam' ayaa la helay si loo wanaajiyo waqtiga falcelinta iyo sidoo kale feejignaanta.
iii. Saamaynta dareemayaasha
Kaabista Oxiracetam waxay leedahay faa iidooyin neuroprotective ah maadaama ay awood u leedahay inay ilaaliso dhaawaca maskaxda iyo hoos u dhaca garashada ee da'da ama xitaa dhaawaca maskaxda.
Sidaa darteed Oxiracetam waxay maskaxda ka siin kartaa maskaxda waxyeelada ay keento cudurka Alzheimers iyo sidoo kale xanuunada kale ee waallida.
Dhowr daraasadood oo xayawaan ah ayaa soo jeedinaya in oxiracetam ay maskaxda ka ilaalin karto dhaawaca. Tusaale ahaan, daraasad lagu soo bandhigay neurotoxins si loo waxyeeleeyo sameynta xusuusta sida dhaawaca maskaxda caadiga ah, daaweynta hore ee oxiracetam ayaa lagu ogaadey inay ka hortagto neerfaha.
Daraasado dheeri ah ayaa shaaca ka qaaday in, daaweynta kadib ee oxiracetam ay ka ilaalin karto jiirka istaroogga istarooga iyadoo yareynaysa cilladaha maskaxda maskaxda.
Daraasad bini'aadam ah oo lagu sameeyay 140 bukaan ah oo la ildaran istaroog dhiig karka ()hypertension), oxiracetam waxaa lagu maamulay a saameynta kobaca dareemayaasha (NGF). Daaweyntan ayaa la ogaaday inay caawineyso maskaxda inay soo kabato iyo sidoo kale kordhinta noolaanshaha. Daraasadda ayaa sii werisay caabuq yaraaday iyo xoojinta muruqyada oo ah calaamadaha soo kabashada dhaawaca maskaxda kadib.
iv. Waxay sare u qaadaa aragtida dareenka
Oxiracetam wuxuu saameeyaa sida aan wax uga aragno shanta dareen ee aragga, urta, taabashada, maqalka iyo xitaa dhadhanka.
Markaad qaadato oxiracetam waxay kordhisaa qulqulka dhiigga maskaxda ee maskaxda ka caawiya in maskaxdu si fiican u aqoonsato una habeyso sidoo kalena u tarjunto wixii aan aragno.
Aragtida dareenka ee la xoojiyay waxay ka dhigan tahay go'aan qaadasho wanaagsan oo qaab deggan.
v. Waxay hagaajisaa ku hadalka hadalka
Oxiracetam waxaa loo muujiyaa inay kor u qaaddo shaqada maskaxda waxayna hagaajin kartaa ku hadalka hadalka. Ku hadalka afka waa mid ka mid ah howlaha garashada ee naga caawinaya inaan macluumaadka kala soo baxno xusuustaada.
Daraasad lagu sameeyay 73 qof oo la ildaran labada nooc ee 'dementia multi-infarct dementia' (MID) ama asaasaqa asaasiga ah ee 'dementia' (PDD), oxiracetam ayaa lagu ogaadey inay ka hortageyso hoos u dhaca garashada iyo sidoo kale inay si weyn u wanaajisay ereyadooda ku hadalka.
vi. Waxay kordhisaa feejignaanta
Soo jeedka iyo feejignaanta ayaa muhiim u ah shaqada ugu fiican. Oxiracetam waxay bixisaa saameyn kiciya oo fudud oo kaa caawisa inaad soo jeedo adigoo kordhinaya socodka dhiigga maskaxda.
Daraasad lagu sameeyay 289 qof oo la ildaran waallida, oxiracetam ayaa laga helay inay kor u qaado shaqooyinka garashada. Waxaa sidoo kale lagu soo warramey inay xoojineyso feejignaanta iyadoo hoos u dhigeysa welwelka iyo dareenka.
Budada Oxiracetam: Sidee loo Qiyaasaa?
Iyada oo ku saleysan tijaabooyinka caafimaad qiyaasta lagu taliyey ee oxiracetam waa 750-1,500 mg maalintii. Qiyaasta oxiracetam waxaa loo kala qaadaa laba qiyaasood oo la qaato subaxa hore iyo galabta hore.
Waa inaad iska ilaalisaa qaadashada kaabashka 'oxiracetam' fiidkii maadaama ay leedahay saameyn kiciya oo fudud oo suurtogal ah inay carqaladeyso hurdadaada.
Maaddaama oxiracetam uu yahay biyo milmi kara waxaa loo qaadan karaa qaab kiniin ah, kaabsal ama xitaa qaab budo ah, cunto ama ha cunin.
Cilmi baaris ayaa muujisay in oxiracetam ay qaadato qiyaastii 1-3 saacadood si ay u gaarto heerarkeeda ugu sareeya ee serum-ka sidaa awgeed waa in la qaataa hal saac kahor howsha loogu talagalay sida waxqabadka barashada. Nolosha badhitaanka 'oxiracetam' waa qiyaastii 8-10 saacadood waana inaad rajeyneysaa inaad gaarto waxqabadka ugu sarreeya toddobaad gudihiis.
In kasta oo, daraasadaha qaarkood ay isticmaaleen qiyaasta sare ee oxiracetam ee ilaa 2,400 mg maalin kasta, had iyo jeer ka bilow qiyaasta ugu wax ku oolka yar ee kor u socota sida loogu baahan yahay.
Intaa waxaa dheer, maadaama oxiracetam uu wanaajiyo waxtarka acetylcholine ee maskaxda, hubi inaad ku xajiso ilaha wanaagsan ee choline sida Alpha GPC ama CDP choline. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka hortagto dhibaatooyinka caadiga ah ee loo yaqaan 'oxiracetam side effects' gaar ahaan madax xanuun sababtoo ah maskaxda oo aan ku filneyn maskaxda.
Oxracetam nootropic guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid nabdoon oo jidhku si fiican ugu dulqaadan karo.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee oxiracetam ee la soo sheegay waxaa ka mid ah;
Madax xanuun- tani waxay dhacdaa marka qofku ilaabo inuu kudarsado oxiracetam il wanaagsan oo loo yaqaan 'choline source'. Madax xanuunku wuxuu ku yimaadaa maskaxda oo ku filan. Tan waxaa looga hortegi karaa iyadoo la qaadanaayo xarigga oxiracetam oo leh isha laga helo sida Alpha GPC.
Hurdo la'aan iyo degganaansho la'aani waa dhif aad u yar oo waxyeellooyin ah 'oxiracetam'. Waxaa la soo wargaliyaa marka qofku qaato qiyaaso aad u sarreeya oo oxiracetam ah ama uu qaato kaabis dambe fiidkii. Si aad uga hortagto dhibaatooyinkaas oxiracetam, had iyo jeer qaado qiyaasta lagu taliyay oo caado ka dhig inaad qaadato oxiracetam galab kahor si looga fogaado khalkhalka hurdada.
Qaar ka mid ah waxyeelooyinka kale ee oxiracetam ee ay ka mid yihiin;
Shuban ama calool fadhi, iyo
Talada Sargaal ee Oxiracetam
Budada Oxiracetam waxay u shaqeysaa si heer sare ah si kor loogu qaado garashada loona kiciyo nidaamka dhexe ee neerfaha kaligiis ama lagu daro waxyaabo kale oo dheeri ah.
-oxiracetam Alpha GPC xidhmooyin
Sida cunsuriyadaha kale, Oxiracetam isku xirnaanta ilaha qadka ayaa aad muhiim u ah. Ku dhajinta Alpha GPC kaliya ma badineyso saameynteeda laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa ka hortagga dhacdooyinka madax-xanuun inta badan la xiriirta maqnaanshaha maskaxda.
Qiyaasta loo yaqaan 'oxiracetam alpha GPC stack' waxay noqonaysaa 750 mg oo ah oxiracetam iyo 150-300 mg oo ah Alpha GPC oo lagu qaadanayo laba qiyaasood, subaxa hore iyo galabtii.
-oxiracetam noopept xidhmooyin
Noopept waa mid ka mid ah nootropics-ka ugu wanaagsan ee lagu yaqaan inuu xoojiyo guud ahaan shaqada garashada wuxuuna u shaqeeyaa si aad ula mid ah racetams.
Markaad isku dulsaarto oxiracetam noopept, waxaad rajeyneysaa inaad dareento shaqeyn garasho oo dheeri ah oo ay ka mid yihiin, xusuusta, barashada, feejignaanta, dhiirigelinta iyo xitaa diiradda.
Qiyaasta caadiga ah ee xidhmadan ayaa noqon doonta 750 mg oo ah oxiracetam iyo 10-30 mg oo noopept ah, oo maalin walba la qaato.
-unifiram oxiracetam duub
Unifiram waa xarun nootropic ah oo loo qaaday si kor loogu qaado garashada oo qaabkeeda kiimikada ay la mid tahay tan racetams. Si kastaba ha noqotee, tijaabooyinka kiliinikada ayaa ka maqan tanina waxay adkeyneysaa in la sheego waxa si fiican u la qabsan kara.
Laakiin mar labaad, maadaama ay u shaqeyso si la mid ah racetams, lebiska 'uniformiram' oo leh 'racetams' oo ay ku jiraan 'oxiracetam' ayaa suurtogal ah inay ka dhasho ficil garasho sare. Waxaa lagu muujiyey inay ka awood badan tahay cunsuriyada sidaa darteedna qiyaaso aad u hooseeya loo baahan doono si loo gaaro saameynta.
Iyada oo ku saleysan khibradaha gaarka ah iyo khibradaha oxiracetam qiyaasta daawadu waa inay ahaataa 5-10 mg oo labis ah iyo 750 mg oo oxiracetam ah oo maalin walba la qaato.
-Oxiracetam iyo Pramiracetam Stack
Oxiracetam waxay si fiican u uruurisaa cunsuriyada kale.
Markaad isticmaasho xargaha oxiracetam leh pramiracetam, shaqada garashada ee xasuusta, diirad saarista iyo dhiirigelinta si heer sare ah ayaa loo hagaajiyay sidoo kale wax soo saarkaaga ayaa laga yaabaa inuu kordho.
Saamaynta fudud ee kiciyaha ee 'oxiracetam' sidoo kale waa la wanaajiyey taas oo kordhinaysa feejignaanta iyo isku-urursanaanta sababtoo ah tamar maskaxeed oo hagaagtay.
Qiyaasta lagu taliyay ee isku-darka ayaa ah 750 mg oo ah oxiracetam iyo 300 mg oo pramiracetam ah oo la qaato hal mar maalintii. Oxiracetam waxaa lagu qaadi karaa calool madhan tan iyo biyaheeda lagu milmi karo halka pramiracetam lagu dari karo cuntada ugu horeysa maadaama ay tahay dufan isku milma dufanka.
Xagee laga iibsadaa oxiracetam
Oxiracetam nootropic waxaa si fudud looga heli karaa khadka tooska ah. Haddii aad tixgelinayso inaad qaadato oxiracetam ka iibso kuwa ugu caansan ee iibiya nootropic khadka tooska ah. Ka fikir inaad si taxaddar leh u baarto waxa ku saabsan budada oxiracetam gaar ah, kaabsulka ama foomka kiniinka la bixiyo.
Hubinta khibradaha oxiracetam ee lagu wadaago websaydhada shirkaddu waa hal dariiqo oo lagu damaanad qaado inaad heshay waxaad raadineysay.
Dib u eegista Oxiracetam ee ku saabsan goobta iibiyeyaashu waa isha furfuran ee nootropics-ka ugu fiican ee loo yaqaan 'oxiracetam nootropics' maxaa yeelay dhammaantood ma bixin doonaan alaab tayo sare leh.
Dysken, MW, Katz, R., Stallone, F., & Kuskowski, M. (1989). Oxiracetam ee daaweynta waallida noocyo badan oo infarct iyo jahawareerka asaasiga ah ee asaasaqa. Joornaalka cilmu-nafsiga iyo cilmiga neerfaha, 1(3), 249-252.
Hlinák Z, Krejcí I. (2005). Oxiracetam kahor-laakiin daaweyn kadib waxay kahorjoogsatay hoos udhaca aqoonsiga bulshada ee lagu soo saaray trimethyltin ee jiirka. Behav Brain Res.
Huang L, Shang E, Fan W, Li X, Li B, Is S, Fu Y, Zhang Y, Li Y, Fang W. (2017). S-oxiracetam wuxuu ka ilaaliyaa istaroogga ischemic-ka iyada oo loo yareynayo cilladda maskaxda dhiigga ee cillad jiirka. Eur J Pharm Sci.
Maina, G., Fiori, L., Torta, R., Fagiani, MB, Ravizza, L., Bonavita, E., Ghiazza, B., Teruzzi, F., Zagnoni, PG, & Ferrario, E. (1989 ). Oxiracetam ee daaweynta asaasiga asaasiga ah iyo jahawareerka badan ee maskaxda: daraasad laba-indhoole ah, daraasad xakameyn ah. Neuropsychobiology, 21(3), 141-145.
Rozzini R, Zanetti O, Bianchetti A. (1992). Waxtarka daaweynta oxiracetam ee daaweynta cilladaha garashada garashada heerka labaad ee asaasaqnimada asaasiga ah.Acta Neurol (Napoli).
Sun, Y., Xu, B., & Zhang, Q. (2018). Cunsurka koritaanka neerfaha ee lagu daro Oxiracetam ee daaweynta Dhiig-baxa Maskaxda ee Dhiig-karka. Joornaalka Pakistan ee cilmiga caafimaadka, 34(1), 73-77.
1.Waa maxay Oxiracetam?
Budada 2.Oxiracetam: Maxaa loo adeegsadaa Oxiracetam?
3.Oxiracetam: Sidee U Shaqaysaa?
4.Oxiracetam Raadka & Faa'iidooyinka
5.Oxiracetam Powder: Sidee loo Qiyaasaa?
7.Oxiracetam Talada Talaalka
8.Halka laga iibsado oxiracetam